विप्लवजी जसरी नेतृत्वमा पुग्नुभयो । उहाँको आफ्नो उहाँको संघर्ष र क्षमता होला, कतै क्रेनले काम गरे होला । जसरी उहाँले पार्टी विभाजन गर्नुभयो, तपाईहरुले केही नगरेर हो कि त्यसका पछाडिी केही थिए अरु ? अव म अहिले पुष्टि नभएका कुरा नगरौँ । तर, अहिले जे भएपनि सन्दर्भ चाहिँ आन्दोलनका केन्द्र जता–जता हुन्छन त्यहाँबाट नेतृत्वको विकास अलि बढी हुँदो रैछ । कुनैबेला झापा आन्दोलन थियो, अहिले एमालेमा त्यही नेतृत्व छ ।
तपाईँहरु जाँदा ३५/४० प्रतिशतले सांगठनिक क्षति भयो । बाबुरामजी जाँदा पनि कहीँ न कही माओवादीलाई क्षति हुने कुरा त भयो । त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरा के हुन्छ त प्रचण्डसँग ? अव सबै क्रान्तिकारीसँगको एकता नै हो । त्यसले हल गर्छ । त्यसले माओवादी आन्दोलनको समस्यालाई पनि हल गर्छ र देशको राजनीतिक आन्दोलनलाई अग्रगमकारी दिशातिर लैजाने कुरामा पनि फाईदा गर्छ ।
स्थानीय निकायको चुनावको विषयमा तपाईँहरुको नयाँ कुरा आएको छ, यो विषयमा के छलफल भएको हो ? हामीले केही पनि छलफल गरेका छैनौँ । राजनीति गर्ने मान्छेले जनतासित जोडिने राजनीतिक गर्नुपर्छ भनेको हो ।
अन्त्यमा, केही छ ? २० वर्ष यताको राजनीति भनेको माओवादीको राजनीति हो । अग्रगमनको राजनीति हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको राजनीति हो । तर, त्यति गर्दा गर्दै पनि अहिले सबैभन्दा राष्ट्र संकटमा छ । इतिहासमा कहिल्यै नभएको राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा छ । एउटा अघोषित नाकाबन्दीले जनताको बिहान बेलुकाको समस्या पनि जटिल बनेर गएको छ । जनताले खोजेको परिवर्तनबाट जनताको जीवनस्तर जुन ढंगले माथि उठ्ला भन्ने थियो, त्यो झन गएगुज्रेको स्थिति बनेको छ । यसको हल अहिलेको महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । कुनैपनि राजनीतिक शक्तिले र त्यसमा पनि आफ्नो एजेण्डा र आफ्नो धार भएको कारणले गर्दा माओवादी शक्तिले गन सक्छ । माओवादीहरुको एकता ईतिहासको आवश्यकता हो । विना विलम्ब सैद्धान्तिक राजनीतिक निष्ठाका आधारमा एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्नेकुरा अपिल गर्न चाहन्छु मैले ।